Archive du 20171110
Tsaho momba ny vaksinina pesta Ho avy ny fisamborana…
Nikorontana ny tanàna ! Izay no azo hamehezana ny zava-nisy teto Antananarivo omaly tontolo andro. Zary lasa resabe ny fielezan’ny feo amin’ny fisian’ny andian’olona mitonona ho mpiasan’ny minisiteran’ny fahasalamana, ary mitety sekoly manao vaksiny ny mpianatra miaraka amina mpitandro ny filaminana.
Raikitra indray ny serasera isan-karazany hoenti-manadio an’i Andry Rajoelina sy ny ekipany tamin’ny famotehana ny firenena tamin’ny taona 2009, ary natao sesilany tany anaty tambajotran-tserasera tato ho ato.
Fivarotana ny Villa Elisabeth Nodiovin’i Serge Zafimahova ny tetezamita
Tsy misy hidiran’ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ny resaka Villa Elisabeth.
Semi-remorque sy “4x4” nifandona Olona 3 indray maty tany Ambatolampy
Nandriaka indray ny ra tany amin’ny lalam-pirenena faha-7 mihazo an’Antsirabe omaly vao mangiran-dratsy. Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina mantsy teo amin’ny PK 65, any amin’ny 4 km tsy hidirana an’Ambatolampy raha avy aty Antananarivo. Olona 3 no indray namoy ny ainy.
Fanodinkodinam-bola –Faritra Anosy Efa nahavita fanadihadiana tany an-toerana ny Bianco
Nazava ny mikasika an’ilay raharaha fanodinkodinambolam-panjakana nalaza be fa niseho tany amin’ny Faritra Anosy ny depiote Hatrefindrazana Jerry,
Biraon’ny holafitry ny mpanao gazety Tsy mifanara-tsaina intsony…
Hentitra ny fanambarana nataon’ny filoha lefitry ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) miisa dimy, ny alarobia lasa teo, izay nanazava fa tsy mankasitraka ny vaomiera handinika ny fanomezana karatra maha matihanina ho an’ny mpanao gazety,
Fiangonana FM FOI Hanatanteraka fotoam-pivavahana lehibe rahampitso sabotsy
Hanatanteraka fotoam-pivavahana lehibe ny fiangonana FM FOI rahampitso sabotsy 11 novambra. Manerana ireo fiangonana 180 eto Madagasikara no hanatanterahana izany ho fisaorana an’Andriamanitra noho ny fihenan’ireo olona matin’ny aretina pesta teto amintsika sy noho ny fahafoanan’ny valanaretina miandalana.
Kianja mitafon’Antsirabe Miroso ny asa fanorenana
Mandeha tsara ny asa fanorenana ny “Gymnase” na kianja mitafo ho an’ny tanànan’Antsirabe. Efa ho tapa-bolana no nanombohana ny asa eo amin’ny kianjan’ny piste Vatofotsy.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Arlette Riama Law Kwan (Mamie Arlette) Tena nanampy ahy teo amin’ny fiainako ny fanatanjahantena
Arlette Riama Law Kwan iray amin’ireo andriambavilanitra 12 nibata ny anaramboninahitra tompondakan’i Afrika teo amin’ny taranja basikety baolina vehivavy tamin’ny taona 1970, tany Lomé TOGO,
« Tournoi Allée des Baobabs » Morondava Anio ny lalao manasa-dalana
Hotanterahina anio zoma 10 novambra ao amin’ny kianja filalaovan’ny Gendarmerie any Morondava ireo lalao manasa-dalan’ny fifaninanana
Tarika « Maggik Mada » Mihira ny fiainana
Ny taona 2015 no nahita masoandro ny tarika « Maggik Mada ». Tanjona ho an’ity tarika ity ny hanambara ny zavamisy tazan’izy ireo eny anivom-piarahamonina (Fitiavana, fiainam-pirenena, fivavahana…. )
Mbola ho avy ny vavalabe mifoha !
Mikorontana ny tany ama-monina ary tsy voafehy intsony ankehitriny. Tsy hay aloha na toe-javatra toy ny mahazatra ihany na dia efa fanakorontanana hiniana volena mihitsy mba tsy hifantohan’ny sain’ny vahoaka amina lafin-javatra iray.
Sakafo tsy madio sy tsy voaaro Mety hahafaty avy hatrany
Mety hahafaty ao anatin’ny fotoana fohy ny fihinanana sakafo tsy madio sy tsy voaaro. Anisan’ireny ireo hamidy eny amoron-dalana, indrindra fa ireo tsy mampiasa fitaovana toy ny vitrine mba hiarovana amin’ny loto.
Olona akaikin’ny mararin’ny pesta Arahi-maso akaiky
Na dia noheveren’ny rehetra fa efa mangingina aza ny aretina pesta dia mbola misy hatrany ary ilana fitandremana tsara.
Fiatrehana ny pesta eny anivon’ny sekoly Tsy mbola nisy ny olana hatreto
Herinandro anio zoma sahady ny nidiran’ny mpianatra nianatra taorian’ny vakansin’ny pesta izay naharitra iray volana. Samy nanao ny ho afany ireo sekoly nandritra ny efatra andro voalohany,
SALON DE L’HABITAT 2017 Atao ny 16 hatramin’ny 19 novambra
Taorian’ny asa fanadiovana natao teny amin’ny Expo Forello Tanjombato noho ny pesta dia fantatra fa hotanterahina ny 16 ka hatramin’ny 19 novambra ho avy izao ihany ny Salon de l’habitat andiany faha-19 karakarain’ny agence de communication la premiere ligne.
Ady amin’ny halatra ao amin’ny ladoany 34 mianadahy no nanasonia fianianana
Naseho ampahibemaso tetsy amin’ny hotely Colbert Antaninarenina omaly ireo 34 mianadahy izay hisahana manokana amin’ny ady atao amin’ireo karazan-kalatra rehetra mitranga ao amin’ny fadintseranana manerana ny nosintsika ao.
Tovolahy niaina tany amin’ny Planeta Mars Tsiambaratelo lehibe no fonosin’ny “Sphinx” any Egypta
Malaza noho ny resaka fahalalahana ara-tsiantifika ananany ny tovolahikely Rosianina antsoina hoe Boriska Kipriyanovich, 20 taona izay nilaza fa niaina tany amin’ny planeta Mars nialohan’ny nahatongavany teto ambonin’ny tany.
Tsy fandriampahalemana eto Madagasikara Nafana ny resaka teny Tsimbazaza
Minisitra telo mirahalahy (fiarovam-pirenena, filaminana anatiny, zandarimariam-pirenena) ary sekretera jeneraly roa (atitany, fitsarana) no indray nifamotoana teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza noho ny fiantsoan’ireo depiote azy ireo (interpellation) avy amin’ny tolo-kevitry ny filohan’ny vaomieran’ny fandriampahalemana ao aminy, Randrianasolo Jean Nicolas, omaly alakamisy 9 novambra 2017.